Nokia 3310 Review: Qarax ka hore ka - Rule News
Nokia 3310 Review: Qarax ka hore ka
Nokia cusub 3310 gaaro waxa badan oo ay u baahan doontaa in aad. Waa phone a asaasiga ah la muuqaalada aasaasiga ah ee cibaaro ah, qolof nostalgic. nolosha batteriga waa weyn, waxa ay taasi wicitaanada iyo Opera Mini waa la yaab leh oo awood u xidha a non-smartphone gudahood.
Crore ah ee Snake, Qoraallada T9 iyo design cayishay ayaa gaynayso ee 3310 ee dhacdo. Laakiin 2G isku xirnaanta iyo camera qashinka a idinka soo kaxayn dhulka
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Nokia 3310 dib u eegis: Qarax ka soo dhaafay, suul xanuun oo dhan,” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo, theguardian.com on Friday 19 May 2017 06.00 UTC
farxo ee taageerayaasha casriga Retro Mobile World Congress iyo ugu dambayntii waa halkan, laakiin ma Nokia cusub 3310 ku nool yihiin ilaa Crore ah? Ma wax kasta oo aad view Rose-madow ee sannadka 2000 waxaa qaylinaya soo baxay?
Ma aha wax badan oo dhab ah lagu tilmaami karaa "halyeey", ha gogo 'oo keliya of technology oo halkan jooga maanta iyo berri tagtay. asalka Nokia ayaa 3310, dunida jacayl u qabay in ka badan for Snake, ay indestructibility Muuqda iyo xog la, waa badan tahay oo ku saabsan sida ugu dhow ee qalabka u hesho.
Badhamada - xusuusan kuwa?
badhamada Oval, a D-suuf iyo xataa meesha iyo dhamaadka badhamada call, ay tahay oo dhan waxaa. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
The "cusub" Nokia 3310 waa sida qadarin ah in asalka ah ee ka badan remake toosan-up. Waxa ay u muuqataa qeexin sida asalka ah, si ay nidaamka buluug iyo cirrada midabka mahad, badhamada gadood iyo Nokia logo. Laakiin shaashadda - hadda bahal 2.4in midabka QVGA ah - iyo jidhka waxaa si weyn u soo hagaagtay, ugu yaraan kaarto a "candybar" phone feature gudahood in uu noqon doono garoonkeeda sida uu sanadkaan u 2010.
dib ayaa ku soo beegmay off u soo bandhigaan batteriga saari, micro-sim iyo booska card microSD - halkan waxaad u baahan doontaa ka weyn ah, wax yar ka weyn sim card size, ma casriga ah Nano-sim, ama ugu yaraan adabtarada ah. hore waa go'an, sidaas darteed soo qaado aad midabka si caqli ah.
In hogaanka jirto booska microUSB ah awoodda, taas oo macnaheedu yahay pin mar dambe u yar Nokia xeedho, iyo hoose wax xataa iPhone Apple ee 7 aan ku faani karo: Jack headphone a.
Booska headphones kuwa halkaas oo ku nool riyo FM-raadiyaha. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Ma shaashadda sida af badan yahay sida ugu ugu dambeeyay ee Samsung Galaxy S8? Ha, aan xitaa u dhow. Laakiin waa arrin midabo iyo leedahay xaglaha daawashada siman adag, haddii kuwa aan toosan, waxa kaliya oo ku saabsan bannaan loo akhrin karaa. Ma ahan xitaa touchscreen a, kaas oo isla goobtii wareersan dadka qaar aan tusay. Halkii aad leedahay badhamada (xusuuso kuwa?), oo ay ku jiraan a D-gashto, dooro, laba badhamada menu, wac sudhaa-up badhamada iyo 12 furayaasha tiro.
Ma ahan arrin sahlan sida jir ah 3310 ee ay doortaan, ilaa, hoos iyo baajiso badhamada, laakiin markaas this aan la ordaya software isku mid. cusub ee 3310 waddaa Taxanaha cusub jir Nokia ayaa 30+ la "UI dhan-cusub nods in asalka ah" oo badan oo fursadaha navigation more. Dhab ahaan, haddii aad ahaayeen in la qaado ka 150 ama mid ka mid ah feature hadda Nokia ee kale ama wax-u -phones "carrab la '" (haa, waxay weli ka sii iibin by qaasaariyay ah), waxaad ka heli lahaa waayo-aragnimo aad u yaqaan.
Kaydinta: 16GB + kaarka microSD (ilaa 32GB)
Nidaamka Operating: Nokia Taxanaha 30+
Camera: 2MP camera danbe la flash LED
Xiriiriyaan: 2G, Bluetooth 3.0, Idaacada FM iyo USB 2.0
Cabirka: 115.6 x 51 x 12.8 mm
Toddobaad ka dhexeeya eedeeyay
Top up la microUSB haddii 3310 weligiisba ku egyahay oo casiir. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
cusub ee 3310 uusan haysan wax badan oo jidka waxqabadka, laakiin waxaa si degdeg ah oo ku filan inuu shaabaho waxa aan ka 2000 waxay soo xusuusan. Waxaa ka dhigi doonaa wicitaanada, diri qoraallada iyo waxa uu leeyahay awoodaha dhirta internet kooban. Waxaa jira 4G no, ama xataa 3G xirnaanta, taas oo macnaheedu yahay in aad ku xayiran on 2G. Marka la eego wax walba oo kale ayaa ka 2G aad quruxsan badan ka heshay network adigu iska, laakiin waxa ay ka dhigan tahay jeer load dheer click-iyo-sugidda iyo tayo liita cod call, sida 2G wacaya kaliya ma aha sida wanaagsan.
Waxaa jira 16MB ah u sheegay of kaydinta (samayn ma, in aan typo a), laakiin dhab ahaan 1.4MB kaliya waa user heli karo sida kuwa kale waxa kor loogu qaaday nidaamka qalliinka iyo apps ka mid ah. Wax kasta oo kale oo u baahan yahay kaarka microSD a, oo ay ku jiraan degsado apps Java iyo ciyaaraha. Waa dhab arrin niyadjab siiyey in £ 50 aad iibsataa 500 times kaydinta (8GB) in loox. Waxaan u suurtagashay in ay buuxiyaan ilaa kaydinta shan sawiro. Best iibsato kaarka microSD ah la.
Nolosha Battery waxa lagu qiyaasaa in maalmood halkii saac, iyo soo jiidasho badan la isticmaalo si joogta ah ayaan hoos ka yar rubuc ka mid ah batteriga maalin. isticmaalka joogtada ah ee wicitaanada, Qoraallada iyo qayb ka mid ah dhirta web aasaasiga ah malaha socon doono ugu yaraan toddobaadkii. Nokia ayaa sheegay in cusub 3310 waxay qaadataa muddo bil ah heegan.
Text waxaa sida ay sannadkii la soo 2000
The Guardian-ka waa kaliya oo ku saabsan isticmaali karo on cusub 3310. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Apps, kulan, music iyo video. Nokia cusub 3310 falaa oo kali ah wax. Waxaad la halmaami karin Spotify, ama wax la mid ah kulanka ee Qabiiladu, Candy ama Super Mario Run, laakiin waxay leeyihiin version cusub ee Snake iyo xarunta soo bixi kulan kale Java haddii aad qabto kaarka microSD a.
Out of sanduuqa aad heysato Weather MSN, MP3 ciyaaryahan, Idaacada FM ah, calculator a, saacad alarm, saacad, abkii, Converter unit, taariikhqorihii cod, app note ah, jadwalka iyo xiriirada. Waxa kale oo jira browser ah oo lagu magacaabo Opera Mini iyo dukaanka app Opera.
Opera Mini waa One oo halkan: waa arrin la yaab leh waxa ha siin karaa waxa uu ordaya on this yar, 2G telefoonka. YouTube? Haaa. The Guardian-ka? Haaa. Gmail? Haaa, inkastoo aadan soo lifaaqi kartaa sawiro ama files kale. Facebook, Twitter oo ugu websites kale shaqada, in mid ka mid ah qaab ama mid kale. Waxaa laga yaabaa inay qaadato da ', oo noqon cajiib daalin dhaqaaqin mouse ku wareegsan oo leh D-gashto, laakiin halkaas ku helo.
Ma jirto WhatsApp ama la mid ah, in kastoo. Sidaas daraaddeed aad tahay inta badan ku xayiran la SMS, laakiin markaas in ay barta, xaq u?
Qoraalka waa sida isagoo ku soo laabtay 2000 ka, T9 text saadaal ah oo dhan. Ka dib markii ku saabsan saacad waxaan ku jiray daafaca midig ilaa xawaaraha, aad. Nasiib darro xawaaraha in uu ahaa glacial. muddo aad u dheer ayay ku qaadatay in Man uted baxay farriimaha fudud in ay qaataan seconds la keyboard dalwaddii.
Waxyaalaha qaarkood laga yaabaa in maalmaha wanaagsan fiican, laakiin saaxiibbo Fariin aan ahaa mid ka mid ah. Waxaan ka helay caloosha oo gacanta ku dhawaad ​​ugala.
Waa Snake, laakiin ma aha arrin sida aad u xusuusan. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Oh ay haa tahay, ka 3310 ayaa Snake, inkastoo ay wax la mid ah waxa aan xusuusan u muuqataa. By default waxa uu qarka u saaran inay hab Mudaysan, halkii badbaadada baxay-iyo-baxay (qof kasta oo hab xusa). Waxaa jira xoog-ups iyo bambooyin, oo waxaa la bixin kari dhaqdhaqaaqa dadab, halkii ay xaq-xaglo, taas oo, saraaxad, waa khiyaameeyay.
Waa xiiso leh ilaa xad, oo waan heli muraaqooda a weeraray waxaa ka mid ah, laakiin anigu dhaqsaan u soo xusuustay sida aad u fiican Monument Valley waa.
camera A, oo ah flash / toosh ku yaala gadaasha dambe. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
cusub ee 3310 leeyahay oo dhan khasaaraha mod ka mid yihiin camera laba-megapixel a. Waxaa baddhamada sawiro, toogasho karo video. Waxaa xitaa uu leeyahay zoom ah.
Laakiin photos yihiin quruxsan xun. Way arki OK shaashadda telefoonka ee, laakiin iyaga ka heli off on si ay smartphone kale ama computer oo waxay u eg ah version rinjiyeynta biyo impressionist waxa aad u malayseen aad qaadato SNAP ah, halkii sawir.
Ma jiro sawir camera, laakiin ma ahan mid aad u adag tahay oo kaliya in ay soo jeedin telefoonka ku wareegsan oo waxay farta ugu wejigaaga.
Regents Canal The toogtay ah 3310. in Fogee si aad u aragto oo Sixira, kuwaas oo u baahan Prisma? Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Qoraalka saadaal ah waa qayb ka mid ah wax qarsoon i. Waxay lahaa "lol" (oo waxaan hubaa lama wax ku 2000) laakiin magaca "Samantha" haysan in ay dictionary
Gudoomiyaha on dib waa la yaab weyn ku
The navigation D-gashto run ahaantii waa wax fiddly oo ay adag tahay in aad isticmaasho oo aan qalad ah garaacid badhanka dooro
screen waa magnet faraha a, laakiin markaas ma loogu tala galay in aad taaban (in kastoo aan si joogto ah sameeyey)
Waa ay fududahay in ku haboon in jeebka, laakiin waa arrin qaro waayo telefoonka ah maalmahan
Helitaanka xiriirada waxay ku waa quruxsan fudud oo isticmaalaya Bluetooth Slam la telefoonka ah Android – kaliya soo jeedin on Bluetooth oo wuxuu ku riday meel u dhow midba midka kale. Shuqullada isku mid ah u diraya sawiro
Nokia cusub 3310 Kharashka £ 50 oo ku yimaado afar midabo.
Qaar badan oo ka mid ah telefoonada Nokia ayaa, sida Nokia ah 150, qiimaha hoos £ 35.
Laakiin haddii aad u malayseen wax ka fiican wakhtigii smartphone pre-touchscreen ah, waxaad ka heli doontaa soo baxay daqiiqo in ay si fudud ma ahaayeen gudahood. Qoraaladda qaadan da'doodu u qoro, waxaad ka heli maroojinayo gacanta ee geedi socodka, oo ma aad tahay xataa runtii, sida runta ah riisanayo dunida internetka. Waxaad ka eegi kartaa email, si aad u marmarsiinyo uma haystaan ​​in aadan.
Haddii aad dhabtii doonaysid dumbphone ah munaasabadda cajiib ah, iyo wax kama qaba bixinta badan qalmay mid, Iibso. doonaa inaad jecel raadinaya waxaa in ka badan si dhab ah u isticmaalaya, laakiin markaas aad u badan tahay ma qorsheynayo inuu aad u isticmaasho. Laakiin haddii aad raadineyso weeyna phone xaalad degdeg ah, ama wax la tuuro, Nokia dhigaysa xamuulka ee qoraalkii aad uga jaban ee fikrad isku mid ah. Waxa ay kaliya ma ku tilmaamay 3310.
Iidooyinka: muddo todobaad ah batari, jack headphone, booska kaarka microSD, batari saari, camera, flash / Dhuxul, Mas
Arrrimaha: T9 daalin, qaali, Spotify no, apps badan ma, 2G-kaliya
Marka aad u soo daadiyaa musqusha, tani ay tahay waxa aad helaysaa in la sameeyo ka hor inta dusin bac oo bariis ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
← Sida loo baxso ee Spies Online Amazon Fire 7 Review Tablet →